Ezikiel 42 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
42 O wee si n’ụzọ dị n’ebe ugwu kpọta m+ n’ogige dị ná mpụta.+ O wee kpọbata m n’ụlọ iri ihe+ nke dị n’ihu ebe ahụ dịpụrụ iche,+ nke dị n’ihu ụlọ ahụ n’ebe ugwu.
2 Akụkụ ya dị otu narị kubit n’ogologo malite n’ọnụ ụzọ nke dị n’ebe ugwu. Ọ dịkwa kubit iri ise n’obosara.
3 N’ihu ebe dị kubit iri abụọ n’ogige dị n’ime+ nakwa n’ihu pevment+ dị n’ogige dị ná mpụta, e nwere veranda+ ndị chere ibe ha ihu n’ụlọ elu ahụ nwere okpukpu atọ.*
4 N’ihu ụlọ iri ihe ndị ahụ, e nwere ụzọ dị kubit iri n’obosara baa n’ime,+ nweekwa ụzọ dị otu kubit, ọnụ ụzọ ha dị n’ebe ugwu.
5 Ụlọ iri ihe ndị dị n’elu asarughị mbara ka ndị dị n’ala, n’ihi na veranda mere ka ha dị ntakịrị karịa ndị dị n’okpuru ha nakwa ndị dị n’ala ụlọ ahụ.
6 N’ihi na ha bụ ụlọ elu nwere okpukpu atọ,+ ha enweghị ogidi dị ka ogidi ndị dị n’ogige ahụ. Ọ bụ ya mere ndị dị n’elu ji dị ntakịrị karịa ndị dị n’etiti na ndị dị n’ala ụlọ ahụ.
7 Mgbidi e ji nkume wuo nke dị ná mpụta dị n’akụkụ ụlọ iri ihe ndị chere ihu n’ogige dị ná mpụta, n’ihu ụlọ iri ihe ndị nke ọzọ. Ogologo ya dị kubit iri ise.
8 Ụlọ iri ihe ndị chere ihu n’ogige dị ná mpụta dị kubit iri ise n’ogologo, ma, lee! akụkụ ya nke chere ụlọ nsọ ahụ ihu dị otu narị kubit.
9 E nwere ọnụ ụzọ dị n’ebe ọwụwa anyanwụ n’okpuru ụlọ iri ihe ndị a ma ọ bụrụ na e si n’ogige dị ná mpụta na-abata n’ime ha.
10 A rụnyere ụlọ iri ihe+ n’uhiè mgbidi ahụ e ji nkume wuo n’ogige dị n’ebe ọwụwa anyanwụ, n’ihu ebe ahụ dịpụrụ iche+ nakwa n’ihu ụlọ ahụ.
11 E nwere ụzọ dị n’ihu ha nke yiri ụzọ nke dị n’ihu ụlọ iri ihe ndị ahụ dị n’ebe ugwu.+ Otú ahụ ka ogologo ha hà, otú ahụkwa ka obosara ha hà. Ụzọ niile e si apụ na ha yiri ibe ha, ụkpụrụ ha yiri ibe ha, ụzọ e si abanye ha yikwara ibe ha.
12 Ọnụ ụzọ ndị e si abanye n’ụlọ iri ihe ndị dị n’ebe ndịda yiri ọnụ ụzọ nke dị n’isi ụzọ, ya bụ, ụzọ ahụ nke dị tupu e ruo mgbidi nke ọzọ e ji nkume wuo, nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ, ma ọ bụrụ na a bata n’ime ya.+
13 O wee sị m: “Ụlọ iri ihe ndị dị n’ebe ugwu na ụlọ iri ihe ndị dị n’ebe ndịda, bụ́ ndị dị n’ihu ebe ahụ dịpụrụ iche,+ bụ ụlọ dị nsọ ndị a na-anọ eri ihe. Ọ bụ ebe ndị nchụàjà ndị na-abịakwute+ Jehova na-anọ eri ihe kasị nsọ.+ N’ebe ahụ ka ha na-edebe ihe ndị kasị nsọ na àjà ọka* na àjà mmehie na àjà ikpe ọmụma, n’ihi na ebe ahụ dị nsọ.+
14 Mgbe ndị nchụàjà batara, ha anaghịkwa esi n’ebe ahụ dị nsọ pụọ gaa n’ogige dị ná mpụta, kama ọ bụ n’ebe ahụ ka ha na-edebe uwe ha na-eyi eje ozi,+ n’ihi na ha bụ ihe dị nsọ. Ha na-eyiri uwe ọzọ+ gaa n’ebe ndị mmadụ nọ.”
15 O wee tụchaa ụlọ ahụ dị n’ime. O wee si n’ọnụ ụzọ ámá nke chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ kpọpụta m,+ o wee tụọ akụkụ ya niile.
16 O ji okporo ahịhịa amị e ji atụ̀ ihe tụọ akụkụ ya nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ. Gbaa gburugburu, ọ dị narị okporo ahịhịa amị ise, mgbe e ji okporo ahịhịa amị ahụ e ji atụ̀ ihe+ tụọ ya.
17 Ọ tụrụ akụkụ ya nke dị n’ebe ugwu, gbaa gburugburu, ọ dị narị okporo ahịhịa amị ise, mgbe e ji okporo ahịhịa amị ahụ e ji atụ̀ ihe tụọ ya.
18 Ọ tụrụ akụkụ ya nke dị n’ebe ndịda, gbaa gburugburu, ọ dị narị okporo ahịhịa amị ise, mgbe e ji okporo ahịhịa amị ahụ e ji atụ̀ ihe tụọ ya.
19 Ọ gara n’akụkụ ya nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ. Ọ tụtara narị okporo ahịhịa amị ise e ji atụ̀ ihe.
20 Ọ tụkwara akụkụ ya anọ. O nwere mgbidi gbaa gburugburu,+ nke ogologo ya dị narị okporo ahịhịa amị ise, obosara ya dịkwa narị okporo ahịhịa amị ise,+ iji kpaa ókè n’etiti ihe dị nsọ na ihe rụrụ arụ.+